भारतबाट विद्युत् आयात बढ्न थाल्यो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
भारतबाट विद्युत् आयात बढ्न थाल्यो
मङि्सर २४, २०७४ 4634 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
हिउँद सुरु भएसँगै नदी तथा खोलामा पानीको बहाब घट्न थालेपछि विद्युत्गृहबाट क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन छोडेको छ । देशमा कम विद्युत् उत्पादन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा पर्न थालेको छ ।
केन्द्रीय प्रणालीमा अहिलेसम्म करिब ९ सय ६० मेगावाटमात्र विद्युत् उपलब्ध छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब साढे ४ सय मेगावाट उपलब्ध गराएका छन् । तर, अहिले निजी प्रवर्द्धकले करिब २ सय ५३ मेगावाटमात्र प्रणालीमा दिन सकेका छन् ।
प्रणालीमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने परिमाण बढाएको छ । गत सातामात्र ३ सय ११ मेगावाट आयात गरेको प्राधिकरणले यो साता (शनिबार) बढाएर ३ सय ५६ मेगावाट पुर्याएको छ । तर, अहिले भारतबाट अाैसत करिब ३ सय ७० मेगावाट अायात भइरहेकाे प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ ।
नदीमा पानीको बहाब थप घट्दै गएकाले विद्युत् आयातको परिमाण पनि बढ्दै गएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘गत वर्ष यही समयको तुलनामा यसपाली करिब १२ प्रतिशत कम विद्युत् उत्पादन भएको छ,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘लोडसेडिङ हुने शंका नगरौं, अहिलेसम्म व्यवस्थापन भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी कुशाह–कटैया १३२ केभी लाइनबाट १ सय ३० मेगावाट, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय लाइनबाट सय मेगावाट र रक्योल–परवानीपुर १३२ केभीबाट ६५ मेगावाट आयात गरेको छ ।
यसैगरी, टनकपुर र रामनगरबाट २५/२५ मेगावाट तथा सीमा क्षेत्रका ३३ केभी लाइनबाट करिब २५ मेगावाट आयात भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले चालू वर्षको अति सुख्खायाममा भारतबाट बढीमा ५ सय मेगावाटसम्म आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार तीन ठूला विद्युत्गृह १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीबाट करिब ३० प्रतिशत उत्पादन घटेको छ ।